नयाँ सालका भित्ताहरू बहुलक मिट्टीबाट बनेको छ। मोडलिंगको लागि सामग्री। मास्टर वर्ग
सबै प्रकार को सुई र रचनात्मकता को बीच, एक विशेष ठाँउ बहुलक मिट्टी देखि खिलौने द्वारा कब्जा गरिन्छ। लेखकको उत्पादन, गुड़िया, प्लास्टिकको स्मृति चिन्ह अचम्म र उनीहरूको उत्कृष्ट सुन्दरतासँग प्रसन्न हुन्छ। तर यो प्रकारको रचनात्मकता न केवल व्यावसायिक डिजाइनरहरू उपलब्ध छन्, तर गृहिणीहरू र आमालाई पनि उपलब्ध छ। यसको अतिरिक्त, बहुलक मिट्टी संग काम plasticine को मोडेललिंग गर्न को लागी छ, जो पनि बच्चाहरु मा संलग्न हुन्छन्।
मोडलिंगको लागि सामग्री
जो बहुलक मिट्टी देखि एक खिलौना बनाउन को निर्णय लिया , मुख्य चीज - अति उत्तम केहि प्राप्त गर्न को लागि। अर्को, कामको सुरुवात चरणमा कस्तो सामग्री र अतिरिक्त उपकरणहरू र अनुकूलन आवश्यकताहरू विचार गर्नुहोस्।
सबै सम्भव रङ को प्लास्टिक खरिद गर्न आवश्यक छैन। भविष्यमा शिल्पमा उपस्थित हुने कि किनारहरू किन्न पर्याप्त छ। बहुलक मिट्टीलाई विशेष विभागमा रचनात्मकताका लागि भेट्न सकिन्छ। एकैछिनमा व्यक्तिगत तत्वहरू, तरल प्लास्टिक पनि उपयोगी छ, जसले पनि तयार पारिएको खिलौनेहरू संग बहुलक मिट्टीको बनाइन्छ। यही भूमिका प्लास्टिक को लागि वार्निश द्वारा गरिन्छ। तिनीहरू या तो पारदर्शी वा ओपेरा, साथ साथै चमक हुन सक्छ। तिनीहरूको प्रयोगले उत्पादन चमक र स्थायित्व दिन्छ। सिंथेटिक ब्रश संग खिलौना मा वार्निश लागू गर्नुहोस्।
महँगो उपकरणहरू सुरुवात सामाग्रीसँग प्रतिस्थापित हुन सक्छ। एक कार्य बोर्डको रूपमा, सिरेमिक वा गिलास बनाइएको फर्श टाइल प्रयोग गर्नुहोस्। विभिन्न grooves सिर्जना गर्ने स्ट्रेट टूथपेक्समा बदल्न सकिन्छ, सुईहरू, पिठहरू, एक अल्ट्रा र अन्य सामानहरू बुनाई। साथै बहुलक मिट्टीको बनाइएका खिलौनेहरूको निर्माण उपयोगी सामान मैनीक्योर सेट हुन सक्छ। प्लास्टिक रोल गर्न, एक विशेष रोलर ऐक्रेलिक प्रयोग गर्नुहोस्, जुन बोतल, शौचालय को पानी र डिकोडेंट वा कुनै पनि धातु को छडबाट कन्टेनरहरू बदलिनेछ।
खिलौनेहरूमा आफ्नै फिंगरप्रिन्टहरूबाट जोगिनको लागी एक क्लोरिकल तीव्र चाकू, सुविधाजनक औंलाहरु चाहिन्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा यो उत्पादनका लागि एक खडा हो र पछिको पाक लागि विभिन्न तत्वहरू। उही बचतका लागि, तपाईं माथिको प्वालहरू बनाएर ग्याटबोर्ड बाकसहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा, घुमाउनुहोस्, विवरण सहित टूथपेन्स घुसाउनुहोस्।
स्व कठोर मिट्टीको लागि, यो ओवनमा राख्न आवश्यक छैन। यो उत्पादन कोठा कोठामा सूखी। तर सुत्ने उपकरणहरू पनि आवश्यक छन्।
एमके: बहुलक मिट्टीबाट हामी क्रिसमस रूखको लागि खिलौने सिर्जना गर्दछौँ
माथि हामीले प्लास्टिकको साथ काम गर्ने कुन उपकरण र सामग्री आवश्यक छ भनेर जाँच गर्यौं। सुरु गर्नु अघि सबै यन्त्रहरू तयारी गर्नुहोस्।
नयाँ वर्षको दौडान देखि, यो क्रिस्लिम मिट्टीको बनाइएको क्रिसमसका खिलौने उत्पादन गर्न उचित छ। सबैभन्दा पहिला, हिरोइनबोन अन्धा हो। कामको प्रक्रियामा तपाईलाई हरियो, खैरो र रातो टोनको प्लास्टिकको आवश्यकता पर्दछ।
स्पाइस चित्रण गर्न को लागी, कोन र मैनीक्योर कैंचीको साथ शंकु मिल्दो, 45 डिग्री को कोणमा परिधि को घनिष्ठ बनाउँदछ, यसैले सुईहरु संग शाखाहरु को अनुकरण सिर्जना गर्दछ। त्यसपछि माटो खैरो रंग अन्धा छोटो ट्रंकबाट हेमको रूपमा।
रातो तारा नबिर्सनुहोस्। यो गर्न, एक स्टेंसिल तयार गर्नुहोस् र पाँच-चिनो आकार बनाउन यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। फास्टनरको रूपमा, तार तारलाई सजिलै उत्पादन मार्फत र ओवनमा स्थान।
क्रिसमस खिलौने बहुलक मिट्टीको बनेको हुन सक्छ वा ठोक्कै वा बलियो। उदाहरणका लागि, हाम्रो क्रिसमसको रूख एक-टुक्रा तीन-आयामी उत्पादन हो। खिलौनाहरू कसरी पदोन्नति बनाउन कसरी हेर्छन्।
मिनी खिलौने कसरी आफ्नै हातले बनाउँदछ?
विशेष विभागहरूमा रचनात्मकताका लागी सामान बेचेर, रेखा चित्रण वा कुनै राहतको लागि ढाँचाहरू प्रदान गरिएको छ। घरमा, मेडलहरूको लागि इनभ्वाइस सुधारिएको सामग्रीबाट गर्न सकिन्छ।
आत्म-कडा बनाउने माटो र रोलिंग पिन लिनुहोस्। तपाईं राहत लागू गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न बालबालिकाको ढाल, आवरण, पाकका आकृति र अन्य उपयोगी विवरण। पितृहरू, पातहरू र कृत्रिम फूलहरूका फूलहरू पनि उपयोगी छन्। चित्रकारीको लागि, तपाईंलाई स्पंज, साथ साथै ऐक्रेलिक लायक चाहिन्छ।
कार्य आवश्यक मात्रा को बहुलक मिट्टी को रोलिंग संग शुरू हुन्छ। शेष प्लास्टिक स्थिरता सेवन देखि बंद छ। त्यसपछि मिट्टीको पाना अग्रिम छाप र स्ट्याम्पमा तैयार अराजक आदेशमा छोड्नुहोस्। त्यसपछि, एक मग प्रयोग गरेर, ढाँचाको साथ एक पदोन्नति काट्नुहोस्। हामी बुनाई सुई वा एक टूथपे संग छिटोको लागि एक छेद बनाउँछौं। प्राकृतिक परिस्थितिमा सूखी। क्रिसमसको खिलौना तयार छ।
एक धेरै आकर्षक गतिविधि बहुलक मिट्टी देखि मोल्डिंग छ। खिलौने र गुडिया आश्चर्यजनक र प्राकृतिक हो।
बुना भयो टोपीले बुनाई सुईको साथ भण्डारण गर्दछन्!
Poodle Artemon - एक माछा को लागि पोशाक परी पर आधारित "स्वर्ण कुञ्जी"
कसरी आफ्नै हातहरूसँग सन्ड्रेस सील गर्ने?
एक केटाको लागि नयाँ वर्षको पोशाक छनौट गर्नुहोस्
सुन्दर Weigela। प्रजनन र हेरविचार
Gulnara Silbaeva अभिनेत्री: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, रोचक तथ्य
कुखुराको भाले र बाँदर: विवाह अनुकूलता, मित्रता र व्यापार क्षेत्र
Oksisayz पेट। Oksisayz: को भुँडी र कमर स्लिमिङ लागि अभ्यास
Teleportation व्यक्ति - कसरी सिक्न? ठाउँ र समयमा सार्दा
Afghan ब्रेकडाउन: दोषी बिना दोषी